Forum serasera malagasy Plagiat - Dinika forum.serasera.org
Fitohizan'ny hafatra : Plagiat
Nehemiah - 16/01/2013 07:48
Izany teny vahiny izany dia midika hoe maka tahaka ny asa tanana na asa kolon-tsain'ny olona iray nefa tsy manome azy ny fiekena sy fankasitrahana sahaza azy. Heverin'ny daholobe ho zavatra ratsy be izany, mitovitovy @ fanaovana hosoka sy piraty. Nefa mahagaga fa nahafahana hanorenana taranja vaovao @ resaka siantsa izany, izany hoe ny biomimétique. Ny vontoatin'izay dia ny maka tahaka ny rafitra izay hita @ tontolo iainana.
Tsy zava-baovao izany raha ny tena marina. T@ fizohina ny vorona no nakan'i Wright mirahalahy ny aingam-panahy hanamboarana ny rôplaniny. Ireo mpamorona ny V2 dia naka tahaka ny bikabika hidrôdinamikan'ny requin. Amin'izao fotoana izao, ny tranon-kala (tranon-kala tena izy lol) no angalan'ny simista aingam-panahy hamoronana akora faran'izay mafy.
Tsy mitsahatra mahita rafitra faran'izay mahalatsa @ zavaboary ny manam-pahaizana, ary heveriny ho tsara alaina tahaka izany. Nefa aiza @'izany i Andriananahary ? Tsy plagiat ihany ve raha maka tahaka ny asa tanany nefa tsy manome Azy ny voninahitra sahaza Azy ?
Masiaka be ny Rom. 1 momba ny olona izay tsy manome voninahitra an'Andriamanitra ho an'ny zavatra nohariany.